Ukuhambelana Cancer futhi Sagittarius kuyinto inyunyana ezithakazelisayo. Umdlavuza ingumuntu umndeni indoda enkulu nge intukuthelo elimnandi, Sagittarius ivame ukuba ukuzimela futhi akakubekezeleli imikhawulo. Yini kuzoletha inyunyana abalingiswa ezahlukene abazalwa? Ukuze uqonde lokhu, qala ucabangele ezinkanyezini "Umdlavuza" futhi "Sagittarius" ngamunye.
Umdlavuza. Outdoor kanye Ungadliwa abantu, ine omuhle kakhulu nokuthula kwangaphakathi nokuthula. Kuyinto yemvelo mncane futhi sengozini, okuyinto engeyinhle njalo. Umdlavuza ukungenwa ukucindezeleka kanye nesimo melancholic. Noma yimuphi Iwakho kungabanga isiyaluyalu ezinzima.
Ngakolunye uhlangothi umusa wabo edonsela, kodwa umuzwa ngokweqile futhi ezifweni ekugcineni kuba ecasulayo, okungase kuholele izimo ingxabano, njengoba umdlavuza bavame Umhlatshelo.
Kodwa ngokuvamile kungcono abantu abahle, abangane abahle futhi izinhlangothi okukhulu. Nabo, mnandi ukukhuluma, abanakho isifiso sokuvelela, okusezingeni eliphezulu ukuzethemba. Umdlavuza afune izinto ngenkani kwabanye ngokwabo, ahlanzekile, njalo ibukeka ingubo enhle futhi imfashini.
Sagittarius. Olinganiselayo imvelo zefilosofi. Lena fighter futhi le mfanelo likhona kuzo zonke izindawo. Kulesi umsebenzi, ethandweni, emoyeni, ubungani. Ngaphakathi romantic amaphupho travel futhi uhambo olude, ngomdlandla ehileleka iyiphi adventure.
isimo sakhe sengqondo sethemba nokujabula futhi intshiseko, kodwa Sagittarius njalo uzama ukuqonda ubukhulu, namathemba amaningi kakhulu nakancane, futhi ngezinye izikhathi engawuqondi yena kanye nezifiso zakhe.
Kusukela Sagittarius ukwenza kakhulu abacwaningi, mlando nabavubukuli. Ivame ukuba imisebenzi ezihilela ngohambo njalo futhi yebhizinisi. Ngokwesibonelo, intatheli. umsebenzi wayo ekwenza kahle, nokukhula umsebenzi.
Ukuhambelana ngesikhathi sokuzalwa komuntu Cancer futhi Sagittarius, uma abantu abanomdlavuza - indoda
Yena - ukuba sekhaya, futhi yena nje buphela, ehlezi ekhaya phakathi kwezindonga ezine. Ufuna ukuba yedwa naye, futhi walaliswa ngakho entula umphakathi! Lena ubuntu ezihlukene kakhulu, ngakho ndawonye ke ngeke kube lula. Umdlavuza okunengqondo, njalo abacabanga ngekusasa, ekwakheni izinhlelo ezikude futhi ufuna, wahlanganyela nokuhlela ikusasa ndawonye, nowesifazane Sagittarius uhlala olulodwa futhi engaqondi ukuthi kungani uzikhohlise amabombo ikusasa ghostly. Asinakusho ukuthi ukuhambisana Cancer futhi Sagittarius ayinakho amathemba, zingabantu nje engasho lutho kakhulu futhi engazinzile.
Laba bantu ukulondoloza Union kuyomelwe bashintshe izisekelo zabo, nabo bobabili, hhayi oyedwa. Owesifazane ukubambezela futhi ngonanzelelo Raku, yena bayokwazisa ke, bazi kahle kamhlophe ukuthi ayekwenza sona. Umdlavuza ngokwalo kufanele nibe nomona futhi insikazi Sagittarius kancane leeway ngaphezulu. Wamafutha kuyoba kancane kancane, kodwa ekugcineni bayofunda ukwamukela omunye komunye, njengoba nje benjalo.
Ukuhambelana Cancer futhi Sagittarius, Umdlavuza, uma owesifazane
Sagittarius indoda ngokuvamile izama ukuthatha kulezi zici nendima evelele. Wayengumuntu imperious futhi ngazo igunya lakhe. Female Cancer kuthatha ngesinqumo sakhe kanye uyavuma ukuma emuva akhe dlulile ezibanzi. Kusukela side ke umnene ngakho ngisho elibuthaka. Wayevame ukubona Sagittarius wakhe kunjalo, kodwa uma peregnet unamathele e ukubonakaliswa authoritarianism sakhe, Umdlavuza ukubekezela siphele! kungazelelwe Sagittarius uthole nanokuphikiswa nehlazo futhi smashing izitsha.
Umehluko kulezi ubudlelwano emaningi khona, ngakho ukuhambisana Cancer futhi Sagittarius ngeke kube idyll umndeni. Sagittarius - a playboy Okuyınqo, angakha edolobheni obomvu akezi ngobusuku obubodwa, idinga ukuba inkampani zabantu. Futhi - uyinkosikazi okuhle iphinifa nge entabeni wamaqebelengwane, ngaphandle ukuthi kubonakala kuye ukuba unesicefe khulu futhi akafuni ukwabelana Uthando lwakhe emphakathini. Laba bantu okunzima ukusebenzelana nabo nomunye, a Umdlavuza zesifazane ungakwazi kuphela lungisa indoda yakhe.
Yini okufanele ibe birthstone for Gemini abesifazane
Lion-Dragon (female): izici zobuntu
Indlela nomhawu izimpawu zomgamu wezulu (esilisa esifazane). Indlela nomona izimpawu ezahlukene zezinkanyezi
Izimpawu zezinkanyezi njengoba isiphuzo? Sithola izici
Ayengobani ngawe ekuphileni esidlule?
Dragon Scales (Male): izici Izimfihlo ubuntu
-Notebook ezimangelengele: ukubuyekeza, abakhiqizi, izincazelo, Ukucaciswa, ukubuyekezwa umsebenzisi
"U-Chief Adam Jones": ukubuyekezwa kwe-movie, isilinganiso
Ibhomu le-athomu: ububi bendawo yonke noma i-panacea yezimpi zomhlaba?
AFC Element Lalka - siyini lesi gibberish? A uhambo olufushane ku sidolobha intsha
"Planet we Apes": Uphenyo ezibukelini movie futhi baxgeki. Ingabe kuwufanele ukubukela "Planet we Apes: The Revolution" (2014)?
Lagman wewundlu: iresiphi ngokuningiliziwe
Indlela usethe mms phezu iphone
Eye lehla "Oksial": yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Dmitriy Pevtsov: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu
Brand uphethiloli izimoto